मनिषा कोइराला सपरिवार रातारात किन नेपाल फर्किए ? – " सुलभ खबर "
मनिषा कोइराला सपरिवार रातारात किन नेपाल फर्किए ?
भैरहवा । बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइराला लकडाउन कायमै रहेका बेला स्वदेश फर्किएकी छन । उनी हवाई मार्ग बन्द भएका बेला आफ्नो नीजि कारमा सबै बन्दोबस्तीका सामान बोकेर सपरिवार नेपाल फर्किएकी छिन् । अभिनेत्री कोइराला मंगलबार बेलहिया नाकाबाट आफ्नो बुबा र आमासँगै निजी गाडीमा स्वदेश आएकी रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले बताए । सीमा पुगेकी उनलाई नेपाली सेनाको एक टोलीले तत्काल पिकअप गरेर लगेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।
सीमामा उनी र उनको परिवार धेरै बेर रोकिनु परेन । मनिषा कोइराला बेलहियाबाट आएको भन्ने जानकारी पाएको प्रजिअ पन्थले बताए । यद्यपि जिल्ला प्रशासनसगँ कुनै समन्वय नभएको हुदाँ अरु विषय थाहा नभएको उनले बताए । उनको परिवारमा होटलमा क्वारेन्टाइन बस्ने बताइएको छ । मनिषाले नेपाल सरकारले हालै संशोधित नक्सा जारी गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेकी थिइन् ।
तर भारतीय मिडियाले नेपालको पक्ष लिएको भन्दै कोइरालाको चर्को आलोचना गरेका थिए । आलोचनापछि त्यहाँ हुँने सम्भावित अप्ठ्यारोलाई मध्यनजर गर्दै उनी लकडाउनकै बीचमा नेपाल आएको बुझिएको छ । मनिषाले नेपालमा सामाजिक काम तथा राजनीतिमा कार्य गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।